Posted by Tranquillus | Feb 14, 2022 | Ny fahaiza-manaon'ny serasera sy ny serasera
Fangatahana fampiakarana karama: ho an'ny ekipanao
-DAHATSORATRA : Tambin'ny ekipa maraina 2022
Ny X, Mr Y,
Vao avy nanao fikojakojana isan-taona izahay tamin'ny xxxxxx. Nandritra ny fifanakalozam-bola dia niresaka momba ny mety ho fitomboana ho an'ny mpiara-miasa amiko sy ny tenako izahay.
Te hanamafy ny fangatahako aho amin'ny fanomezana anao ohatra manokana momba ny asa vitako tamin'ny ekipako.
Mazava sy mirindra foana ny toromariko.
Ny tanjona dia matetika andiana asa voafaritra tsara izay azon'ny mpikambana ao amin'ny vondrona tanterahana tanteraka.
Mihaino foana aho
Fantatro tsara ny fomba hamantarana ny hevi-dehiben’ny tsirairay sy ny fametrahana azy ireo handroso mba hahombiazan’ny asa fitoriana ataontsika.
Farany, ao amin'ny departemantako dia tena tsara ny atmosfera. Misy firindran'ny vondrona lehibe sy fahavitrihana izay mahasoa ny rehetra
miatrika ny andraikiny ny tsirairay, manao ny asany amim-pahombiazana, ary manome an-tsitrapo ny fanampiana rehefa ilaina izany.
Tena tiako ho raisinareo ireo singa rehetra izay toa ahy fa tena ilaina amin'ny fahombiazan'ny orinasa iray, ary ny hanomezanao fampiakarana karama ho an'ny taona 2022 ho an'ny mpiasako rehetra. Tena fankasitrahana ho azy ireo izany ary ambonin’izany rehetra izany, ity tosika kely ity dia hanome vahana azy ireo amin’ny fanombohana ny taona vaovao.
Mazava ho azy fa mijanona ho eo am-pelatananao manontolo aho raha te hiresaka momba izany indray ianao.
Mba raiso, Ramatoa X, Andriamatoa Y, ny fiarahabana ahy.
Fangatahana fampiakarana karama: Sehatry ny fiantohana amin’ny banky
-DAHATSORATRA : Ny karamako tamin'ny 2022
Hatramin'ny xxxxxx dia niasa tao amin'ny banky ho mpanolotsaina aho.
Raha mamela ny tenako hanoratra aminareo androany aho dia ny hiresaka amin'ny teboka iray tena akaiky ny foko: ny karamako ho an'ny taona 2022.
Mamelà ahy aloha hanantitrantitra fa tamin'ny faran'ny volana Novambra dia nahatanteraka ny tanjona rehetra nomenao ahy aho, dia ny:
Fisokafana kaonty maromaro izay nitombo nanomboka tamin'ny xx tamin'ny taona 2020 ka hatramin'ny xx tamin'ny taona 2021
Famandrihana amin'ny serivisy atolotry ny banky ho an'ny mpanjifa xx, izany hoe ny totalin'ny: xxxx euros.
Nitombo be ihany koa ny fiantohana aina.
Nanatrika ny fiofanana rehetra ihany koa aho mba hahafantarana ny vokatra ara-bola rehetra natolotry ny Banky.
Farany, mandroso mazava ho an'ny fiantohana aho. Araka ny nomarihinao tamiko nandritra ny dinidinika taminay tamin'ny taon-dasa dia teboka malemy ho ahy izany. Nanaiky ihany koa ianao fa manaraka fiofanana vaovao aho, izay nanampy ahy betsaka tamin'ny fanaovana ny famelabelarako amin'ny mpanjifa.
Izany no antony hamelako ny tenako hangataka tafatafa aminareo mba hiresaka momba ny karamako ho an'ny taona 2022.
Amin'ity fihaonana ity dia mikasa ny hangataka fiofanana amin'ny fivarotana ny vokatray rehetra amin'ny telefaona ihany koa aho. Heveriko fa hahomby kokoa aho amin'izay.
Mazava ho azy fa mijanona eo am-pelatananao manontolo aho raha mila fanazavana fanampiny.
Fangatahana fampiakarana karama: mpanampy mpanatanteraka
Ramatoa Tale, Mr Tale,
Mpiasan'ny rafitra kely misy anay nanomboka tamin'ny XXXXXX, mitana ny toeran'ny mpanampy mpanatanteraka aho amin'izao fotoana izao.
Misaotra anao koa aho noho ny fahatokisanao ahy.
Ny fahaizako, ny fandraisako ary ny fampiasam-bolako dia fantatra hatrany. Tamin'ny taona 2021, nanao fanovana maromaro aho izay tsy vitan'ny hoe nampidina ny vidin'ny fampandehanana sasany, fa nanatsara ny fiainan'ny orinasa ihany koa.
Afaka manome ohatra manan-danja vitsivitsy ho anao aho:
Nifampiraharaha fifanarahana tsy mbola nisy toy izany tamina orinasa mpanadio aho. Nihena xx% araka izany ny habetsaky ny tombontsoa. Na dia nihatsara aza ny kalitaon’ny asa nentin’ilay mpandahateny vaovao. Mahafinaritra kokoa ny trano!
Niasa tamin'ny vidin'ny kojakoja birao ihany koa aho ary tao koa dia nahavita nahazo fepetra tsara kokoa aho.
Niara-namorona diary anatiny izay nanoratako lahatsoratra vitsivitsy izahay.
Farany, mijanona foana aho hamaly ny fangatahanao rehetra ary haingana aho hanao zavatra haingana araka izay irinao.
Izany no mahatonga ahy hamela ny tenako hangataka aminao mba hahazoana ny fampiakarana karama ho an'ny taona 2022, izay tena fampaherezana ho ahy.
Koa manantena aho fa hiara-hiresaka momba ity lohahevitra ity isika mandritra ny fotoana ho avy izay ekenao homena ahy.
Ekeo, Ramatoa Tale, Andriamatoa Tale, ny fiarahabana ahy.
Fangatahana fampiakarana karama: agent de voyage
Mpiasan'ny orinasa hatramin'ny XXXXXX, mitazona ny toeran'ny mpandraharaha fitsangatsanganana aho amin'izao fotoana izao.
Fantatro tsara fa ny krizy iainan'ny rehetra amin'izao fotoana izao dia nisy fiatraikany manokana taminareo ary niatrika olana tsy tambo isaina ianareo. Nitombo indray anefa ny famandrihan-toerana (indrindra ho an’ny faritra samihafa eto Frantsa) ary mitombo ihany koa ny fangatahana fanofana fiara.
Izany no antony hamelako ny tenako hangataka fotoana miaraka aminareo hiara-midinika ny karamako amin'ny 2022.
Te-hanamarika ihany koa aho fa nandao ny orinasa ny roa tamin'ireo mpiara-miasa tamiko ary izaho izao no miandraikitra ny antontan-taratasin'izy ireo. Manaraka ny mpanjifa xxx aho fa xxx ihany ny isany teo aloha. Farany, nanao famandrihana xxx aho tamin'ny 2021, izay mampiseho fitomboana % raha oharina amin'ny taona 2019, taona tsy mbola nisy ny valan'aretina Covid.
Tena tiako ny hanasongadina ny maha matotra ahy sy ny fampiasako vola amin'ny orinasa. Tena fankasitrahana ho an'ny asako ny fahazoana vola.
Mazava ho azy, mijanona eo am-pelatananao manontolo aho raha mila fanazavana fanampiny.
Fangatahana fampiakarana karama: mpikarama
Mpiasan'ny orinasa hatramin'ny XXXXXX, mitana ny toeran'ny mpisambo-bola aho amin'izao fotoana izao.
Tena matihanina amin'ny fandaminana ny fitaterana, ny asako dia zaraina toy izao manaraka izao:
Fifandraisana amin'ny mpanjifa manana entana hotaterina
Tadiavo ny mpitatitra izay hanome ity serivisy ity
Hifampiraharaha ny vidiny
Ataovy azo antoka fa ampita tsara amin'ny mpamily ny fepetra takian'ny mpanjifa
Hamarino fa azo alefa ny entana
Amin'ity asa ity, izay atao amin'ny telefaona ihany, dia manana fifandraisana tsara amin'ny mpanjifa aho. Tsy maintsy lazaina fa nanangana tambajotran'ny mpitatitra tena izy izay mametraka ny fitokisany amiko ary manana soatoavina serivisy mitovy amiko. Noho izany dia tena mandray andraikitra aho ary afa-po tanteraka ny olona rehetra miara-miasa amiko. Lasa mpiara-miasa amin'izy ireo amin'ny logistics aho fa tsy mpamatsy fotsiny.
Ireo teboka rehetra ireo dia avy amin'ny fiavian'ny orinasanay amin'ny fitomboan'ny vola miditra amin'ny xx% tamin'ny taona 2021 na dia teo aza ny olan'ny areti-mifindra.
Izany no nahatonga ahy ho ara-dalàna tamin'ny fivoriana farany nataoko mba hangataka aminao ny fampiakarana ny karamako ho an'ny taona 2022. Malalako ny manoratra izany rehetra izany, mba hahafahanao manombana ny maha-zava-dehibe ahy sy ny faniriako. manaova bebe kokoa hatrany, manaova tsara kokoa hatrany.
Eo am-piandrasana ny fanapahan-kevitrao dia mijanona ho eo am-pelatananao manontolo aho.
Fangatahana fampiakarana karama: fandraisana
Nanaiky izahay hanao ny fikojakojana isan-taona amin'ny XXXXXX. Amin'ity tafatafa ity dia tiako ny hiresaka momba ny tambin-karama ho an'ny taona 2022. Toa nanaporofo ny fandraisako anjara amin'ny orinasa aho, indrindra amin'ireto ohatra vitsivitsy ireto:
Ny fandraisana ny orinasa dia karakaraina tsy misy kilema hatrany mba hiadanan’ny vahoaka
Ny mailaka sy ny entana dia alefa ara-potoana foana.
Nanangana rafitra fifandraisana aho, tamin'ny alàlan'ny Skype, mba hampahafantarana ny mpiara-miasa amin'ny fahatongavan'ny fonosana iray
Noho izany dia mamela ny tenako hangataka fampiakarana karama ho an'ny taona 2022, izay tena fampaherezana sy fankasitrahana ho ahy. Efa vonona mihitsy aza aho, mazava ho azy, handray andraikitra hafa sy andraikitra hafa mety hanatsara ny fampandehanan-draharahan’ny orinasa toy ny: fitantanana ny fiarakodia (assurance, inspection, fanamarinana ny faktiora elektronika), fanofana. Mazava ho azy fa afaka manolotra soso-kevitra samihafa aminao aho.
Noho izany dia manantena aho fa hiara-hiresaka momba ity lohahevitra ity isika mandritra ny fotoana ho avy izay homenao ahy.
Fangatahana fampiakarana karama: mpividy
Hatramin'ny XXXXXX dia mampiasa ny asan'ny mpividy ao amin'ny orinasa XXXXXX aho.
Noho ny fahalalako ny toerana sy ny traikefako dia mahatsiaro ho vonona aho anio handray andraikitra vaovao.
Mamelà ahy aloha hamintina eto amin'ny teny vitsivitsy, ireo iraka samihafa notontosaiko tamim-pahombiazana hatramin'ny nahatongavako.
Nanangana mpanome tolotra vaovao aho izay nahafahan'ny orinasa nampihena be ny vidin'ny kojakojanay.
Nojereko avokoa ny fandraisan'anjaran'ireo mpamatsy tranainy indrindra anay ary nohavaozinay niaraka tamin'izy ireo ny mombamomba anay.
Niresaka momba ny fe-potoana fikojakojana ihany koa aho mba hahafahana mamaly haingana kokoa ny filan'ny mpanjifanay.
Farany dia nandinika ny fanjifana ny entana tsirairay aho ary nandamina famenoana mandeha ho azy mba tsy ho lany ny sampana famokarana.
Araka ny fantatra dia niaro ny tombontsoan’ny orinasa foana aho ary mbola hanohy izany, satria izay no fahitako ny asako.
Izany no antony ahazoako fahalalahana mangataka aminao mba hanome ahy fotoana tsara, araka izay mety aminao, hiresaka momba izany.
Fangatahana fampiakarana karama: mpanampy mpivarotra
Mpiasan'ny orinasa hatramin'ny XXXXXX, mitazona ny toeran'ny Sales Assistant aho amin'izao fotoana izao.
Ny fahaizako, ny fandraisako ary ny fampiasam-bolako dia fantatra hatrany. Tamin'ny taona 2021, ny vokatra azo sy ny iraka niandraikitra ahy dia nahafahan'ny orinasa nanatsara ny serivisy ho an'ny mpanjifa. Mamela ny tenako aho, momba ity lohahevitra ity, mitanisa ohatra manokana vitsivitsy:
Nanangana rindrambaiko vaovao hampidirana sy fanaraha-maso ny baikon'ny mpanjifa ny orinasa, miaraka amin'ny fiaraha-miasa amiko. Noho izany dia miatrika tranga maro isan'andro aho: XXXXXX fa tsy XXXXXX teo aloha.
Nanangana fivoriana isan-kerinandro niaraka tamin'ny mpiara-miasa tamiko tao amin'ny magazay ihany koa aho, izay manome ahy fahafahana handinika ny tranga tsirairay. Noho izany dia marihiko ny fifandraisana tsara kokoa eo amin'ny sampan-draharahanay, izay mamela ahy hamaly amin'ny fomba mahomby kokoa ny mpanjifanay satria afaka manome azy ireo vahaolana haingana aho.
Farany, naka lesona anglisy nandritra ny taona aho tamin'ny alalan'ny CPF, tamin'ny alàlan'ny horonan-tsary, tao an-trano tamin'ny takariva. Marina fa fanofanana manokana izany, fa ireo fahaiza-manao ireo indrindra dia atolotra ho tombontsoan'ny orinasa satria mampiasa azy ireo isan'andro amin'ny fanatontosana ny adidy aho.
Mamela ny tenako àry aho hangataka fampiakarana karama ho an’ny taona 2022, izay tena fampaherezana ho ahy.
Fangatahana fampiakarana karama: varotra mipetrapetraka
Mpiasan'ny orinasa hatramin'ny XXXXXX, mitazona ny toeran'ny varotra sedentary aho amin'izao fotoana izao
Nanomboka tamin'io daty io dia nanatsara ny fahaizako aho hatramin'ny nahazoako ny fahalalana ara-teknika rehetra ilaina amin'ny famaliana ny fanontanian'ny mpanjifa sy ny fananganana teny. Nanaraka fiofanana maro aho ary tsy misalasala manontany ny sampan-draharahan'ny famokarana mba hahatakatra ny fomba fiasan'ny ampahany iray sy ny fizotrany.
Manomboka izao dia lasa mavitrika kokoa aho ary tsy mitsahatra mitombo ny isan'ny tombana napetrako. Eny tokoa, tamin'ny 2021, nanao teny xx aho raha tamin'ny 2020, ny isa dia xx.
Farany, araka ny fantatrao, dia mampiasa vola tanteraka amin'ny asako aho ary vonona foana aho. Ny mpivarotra miara-miasa amiko dia hanamafy fa eo am-panompoana ny mpanjifany foana aho.
Noho izany dia toa nanatsara be ny kalitaon'ny fifandraisana amin'ny mpanjifanay aho na amin'ireo mpanjifanay mahazatra.
Nivoatra ihany koa ny famandrihana ny fanendrena mahafeno fepetra. Izany dia nahafahana nitombo xx% tamin'ity taona ity.
Mbola eo am-pelatananao manontolo aho.
Fangatahana fampiakarana karama: comptable 1
Ho tohin'ny resadresaka nataonay tamin'i xxxxxx, dia mamela ny tenako hanoratra ny hevitra navoaka momba ny karamako ho an'ny taona 2022 aho.
Voalohany indrindra, tiako ny mampahatsiahy anao fa niasa ho kaonty aho hatramin'ny xxxxxx tao anatin'ny orinasa YY ary tena tiako ny asako.
Niara-nijery ny iraka natao tamin'ny taona 2021 izahay ary nanamafy ianao fa nankasitraka ny fampiasam-bola nataoko ary indrindra ny fahombiazan'ny tsirairay.
Noho izany, nametraka takela-bolam-bola isam-bolana aho izay nanampy anao handray fanapahan-kevitra sy hitantana ny orinasa araka izay tratra.
Nametraka fanaraha-maso manokana ny fandoavana ny mpanjifa aho ary noho izany dia nihena be ny fandoavam-bola tsy voaloa. Tamin'ny taona 2020 dia nanana ny fitambaran'ny …….ary fahatarana …….. andro isika raha tamin'ny 2021 ny sarany dia……….ary ny isan'ny andro dia izao………..
Koa mamela ny tenako hamerina ny fangatahako fampiakarana karama ho an’ny taona 2022, izay tena fampaherezana ho ahy.
Mazava ho azy fa eo ampelatananao aho raha te hiresaka momba izany indray ianao.
Fangatahana fampiakarana karama: comptable 2
Hatramin'ny xxxxxx ao anatin'ny Orinasa dia mampiasa ny asan'ny kaonty aho ary miandraikitra manokana ny sosialy.
Tena mafy tamiko ireo 2 taona farany 2020 sy 2021 ireo. Ny areti-mifindra mbola tsy nisy toy izany sy ny toe-javatra sarotra tsy maintsy nofehezinay dia nanery ahy hifanaraka amin'ny olana samihafa. Raha tsy nisy fiofanana, dia nilaina ny namorona fizarana vaovao ao amin'ny karama. Nikarakara ny fanonerana ny ampahany amin'ny tsy fananan'asa sy ny fifandraisana rehetra amin'ny fitantanan-draharaha koa aho. Nandritra ny fanaraha-maso nataony dia nanantitrantitra ihany koa ny kaonty fa tsy nisy ny fahadisoana.
Tena nanan-karena ho ahy ity traikefa ity ary toa efa nandray ny fanamby aho. Nandany vola be aho mba handehanana ara-dalàna ny serivisy ary tsy hijaly ny mpiara-miasa amiko, ankoatra ny fahasimbana nateraky ity valan'aretina ity, olana fanampiny.
Tena mahafaly ahy àry ny mahazo fampiakarana ny karamako.
Mazava ho azy fa eo am-pelatananao aho raha te hiresaka momba izany ianao mandritra ny fotoana iray.
Fangatahana fampiakarana karama: developer
Mpiasan'ny orinasa hatramin'ny XXXXXX, mitazona ny toeran'ny mpamorona aho amin'izao fotoana izao.
Nanomboka tamin'io daty io dia nanohy nanosika ny fanavaozana ny fampiharana isan-karazany an'ny orinasa aho.
Araka ny fantatrao dia efa nitarika tetikasa maromaro izay niteraka varotra aho.
Izaho koa no mpanohana ny mpanjifa amin'ny fampiasana ny tranokalanay vaovao ary mandeha tsara ny zava-drehetra.
Farany, mamolavola fampiharana iray aho amin'izao fotoana izao izay hanova ny fomba fiasantsika ary indrindra indrindra dia hamonjy fotoana sarobidy ho an'ny mpiasa rehetra ao amin'ny orinasa.
Tena mamorona aho, manararaotra ireo vahaolana mifandraika indrindra aho hahazoana rafitra informatika azo antoka sy intuitive. Mampiasa vola tanteraka amin'ny asako aho ary vonona foana aho.
Noho izany dia toa nanatsara be ny kalitaon'ny asan'ny tsirairay aho. Raha ny marina dia mikaroka foana ny fivoaran'ny teknolojia vaovao aho, manamarina ihany koa ny toerana misy ny tranokalan'ny mpifaninana.
Mangataka fampiakarana karama : pn'aiza n'aiza 1
Mpiasan'ny orinasanao nandritra ny xx taona, mitazona ny toeran'ny.
Nandritra ny volana vitsivitsy izao, dia nahatsikaritra aho fa omenareo asa bebe kokoa sy adidy bebe kokoa aho. Faly sy faly mandray anjara amin'ny fampandrosoana ny orinasa aho.
Tsy isalasalana fa ho hitanao fa tsy manisa ny orako aho, matotra aho, manao ny asako ara-potoana foana aho ary nivoatra ny fahaizako.
Izany no antony itadiavako tombontsoa amin’ny fampiakarana karama ho an’ny taona 2022. Ny karamako dia hifanaraka amin’ny adidiko.
Ny orinasa sy ny toerana zakako dia mahafeno tanteraka ny andrasako. Mahatsiaro ho afa-po aho ary mankasitraka ny hasarobidin'ny mpiara-miasa amiko. Mifanohana hatrany ary tokana ihany ny tanjona: ny fahafaham-po amin’ny mpanjifa.
Izany no antony itadiavako fihaonana hiara-midinika ny fangatahako.
Mazava ho azy fa mijanona ho eo am-pelatananao manontolo aho momba ny daty sy ny ora hanaovana ity tafatafa ity.
Mangataka fampiakarana karama : pn'aiza n'aiza 2
Mpiasan'ny orinasa hatramin'ny XXXXXX, xxxxx aho amin'izao fotoana izao ary nanao dinidinika tamin'ny xxxxxx izahay.
Nandritra ity tafatafa ity dia naneho hevitra maromaro ho fanatsarana ianao:
Be loatra ny fahadisoana tsipelina amin'ny hafatro
Noho izany dia noraisiko ireo teboka 2 izay toa tena zava-dehibe amiko. Afaka nanatsara ny fahaizako aho. Eny tokoa, noho ny fanampian'ny CPF dia nanaraka fiofanana amin'ny teny frantsay aho ary indrindra indrindra amin'ny tsipelina sy ny fitsipi-pitenenana. Amin'ny ora XX rehetra amin'ny lesona. Ireo ora fianarana ireo dia nahafahako nanatsara ny fanoratana ny hafatro. Nasehonao ahy izany, izay tena nankafiziko.
Mikasika ny fandraisako dia nanapa-kevitra aho ny hampiasa, araka ny soso-kevitrao, ny Outlook mba hisoratra anarana sy hanasokajiana ny asa rehetra tsy maintsy ataoko mandritra ny andro. Araka izany dia tsy manadino intsony aho ary ataoko antoka fa vita sy ara-potoana avokoa ireo. Izaho manokana dia mahita fampiononana amin'ny asa miaraka amin'ity fomba vaovao ity ary indrindra, milamina kokoa aho.
Manantena aho fa mankasitraka ity ezaka fanovàna ity sy ny fiezahako hanatsara ianao.
Fangatahana fampiakarana karama: mpisolovava
Manampahaizana manokana momba ny lalàna, izaho no mpiara-miresaka aminao ary mpanolotsaina manana tombontsoa amin'ny olana ara-dalàna rehetra ao amin'ny Orinasa.
Amin'ny ankapobeny, mikarakara ny fiarovana ny tombontsoanao momba ny fananana indostrialy aho, ary koa ny fangatahana patanty rehetra sy ny fiarovana azy ireo.
Manao fiambenana mifaninana aho ary tsy misalasala mirotsaka an-tsehatra raha misy ahiahy amin'ny dika mitovy amin'ny patantynao. Miaro ny tombontsoan'ny orinasa isan'andro aho.
Tamin'ity taona ity dia nanaraka manokana ny rakitra YY izay niteraka ahiahy lehibe ho anay, naharitra ela be ny nananganana azy niaraka tamin'ny fanampian'ny mpahay lalàna, sarotra be izany. Saingy, niasa be aho, nitady sy nahita ny fahadisoan'ny fahavalontsika rehetra. Ary nivoaka ho mpandresy izahay!
Izaho koa dia mandinika ny fifanarahana rehetra, ny loza mety hitranga, mijery ny fivoaran'ny lalàna aho. Azon'ny sampana rehetra ao amin'ny orinasa aho hamaly ny fanontaniana rehetra ary hanamarina fa milamina ny zava-drehetra.
Fantatrao izao ny fahamatorako, ny fahafahako ary ny kalitaon'ny asako.
Izany no mahatonga ahy mamela ny tenako hangataka aminao ny fampiakarana ny karamako ho an'ny taona 2022.
Mbola eo am-pelatananao manontolo aho hiresaka momba izany rehefa tianao.
Mangataka fampiakarana ny karama: mpivarotra
-DAHATSORATRA: Ny karamako tamin'ny 2022
Mpiasan'ny orinasa hatramin'ny XXXXXX, mitana ny toeran'ny mpikarakara fivarotana aho amin'izao fotoana izao, mpitantana trano fanatobiana entana.
Tena matihanina amin'ny fandaminana sy fanomanana ny baiko, nomenao ahy, tamin'ny 2021, andraikitra maro hafa
Nanakarama mpitantana vaovao izahay. Noho izany dia tsy maintsy mandamina ny baikony aho mba hiomanana, mijery ny asany tsindraindray ary manampy azy rehefa ilaina izany.
Mitantana ny fikojakojana ny fiaramanidin'ny fitaovam-pandevenana aho
Ampidiro ao amin'ny ERP ny baikon'ny mpanjifa
Mampiditra baiko mpamatsy ihany koa aho
Faly tanteraka ihany koa aho noho ny fahatokisanao ahy ary zakako tanteraka ny adidiko vaovao. Afaka milaza mihitsy aza aho fa tanteraka ny asako.
Araka ny efa nomarihinao dia tsy nisy lesoka tamin'ny baikon'ny mpanjifa tamin'ity taona ity. Ho fanampin'izay dia nanangana fiaraha-miasa tamin'ny mpitatitra aho ary teo koa dia tsy nanana olana izahay afa-tsy ny fahatarana fanaterana in-3 tamin'ny taona 2021.
Matetika koa aho no mifandray amin'ny mpanjifa amin'ny fandefasana entana ary mandeha tsara ny zava-drehetra.
Fangatahana fampiakarana karama: marketing
Vao avy nanao dinidinika isan-taona tao amin'ny xxxxxx izahay izay niresaka momba ny tambin-karamako tamin'ny 2022 sy ny mety ho fisondrotana.
Te hanamafy ny fangatahako aho amin'ny fanomezana anao ohatra manokana momba ny asa mahomby:
Ny orinasa amin'izao fotoana izao dia hita bebe kokoa amin'ny tambajotra sosialy. Isan'andro dia mandefa sary miaraka amin'ny lahatsoratra mahasarika indrindra aho. Noho izany dia mifandray amin'ireo solontenan'ny varotra izay ananako ny vaovao momba ny mpanjifa sy ny baiko azonay ary koa ny tranokala nandraisanay anjara.
Mandefa Gazety isaky ny 15 andro amin'ny mpanjifanay izahay. Manoratra manontolo aho ary mikarakara ny fizarana.
Farany, voamarikao ny fandraisako anjara amin'ny orinasa. Izaho no loharanon'ny hevitra vaovao sy tany am-boalohany. Ekeko tanteraka ny fanakianana izay arahina ara-dalàna amin'ny tolo-kevitra mifanohitra. Mitady vahaolana foana aho.
Noho izany dia mamela ny tenako hanontany anao indray ny fampiakarana karama ho an'ny taona 2022. Tena fanekena ny hasarobidin'ny asako izany.
Fangatahana fampiakarana karama: sekretera mpitsabo
Mpiasan'ny orinasanao hatramin'ny XXXXXX, mamela ny tenako hangataka fotoana aminao aho mba hiara-midinika ny karamako amin'ny 2022.
Voalohany indrindra dia misaotra anareo aho noho ny fahatokisanareo ahy.
Ny fahaizako, ny fandraisako ary ny fampiasam-bolako dia fantatra hatrany. Tamin'ity taona ity dia nanao hetsika maromaro aho izay azoko antoka fa niteraka fanatsarana lehibe teo amin'ny fampandehanan'ny orinasa.
Ny trano dia voakojakoja tsara sy voadio tsy tapaka. Nametraka vehivavy mpanadio izay tonga in-2 na in-3 isan'andro aho, araka ny nangatahinao tamiko. Noho izany dia fiarovana ho an'ny marary, fa ho antsika ihany koa.
Ny fanendrena dia atao araka ny fanirianao sy ny fandaharam-potoananao. Miara-miasa amin'ny toe-tsaina tsara izahay ary mitovy ny soatoavina: manome fikarakarana tsara ny marary.
Ny minitran'ny fifampidinihana dia soratana haingana aorian'ny fitsidihana tsirairay ary alefa any amin'ny mpiara-miasa aminao raha ilaina. Tsy manam-potoana aho.
Farany, mijanona foana aho ary tsy manisa ny orako raha mila ahy ny marary.
Izany no antony tiako hiarahantsika miresaka momba ity lohahevitra ity mandritra ny fotoana ho avy izay homenao ahy.
Fangatahana fampiakarana karama: teknisianina
Vao haingana izahay no nihaona tamin'ny tafatafa manokana nataoko, ilay xxxxxx. Nandritra io dinika io dia nangataka ny hampiakarana ny karamako aho amin’ity taona 2022 ity. Te-hametraka an-tsoratra ireo hevitra rehetra voalazanay aho mba hampisehoana aminareo ny hetsika rehetra nataoko:
Matetika aho no miaraka amin'ny mpivarotra amin'ny mpanjifa mba hanome fanohanana ara-teknika
Manampy amin'ny famokarana aho alohan'ny fandefasana kojakoja vaovao ary manamarina fa mifanaraka amin'ny baiko ny zava-drehetra
Mamaly an-telefaona sy mailaka amin'ireo mpanjifa manana fanontaniana ara-teknika aho
Manamarina ny teny tsirairay aho
Manamboatra ny drafitra ho fanamarinana aho
Noho izany dia heveriko fa ireo fahaiza-manao rehetra ireo dia tena manampy ny orinasa.
Tena mahaleo tena aho. Azo antoka sy haingana foana ny valinteniko.
Mazava ho azy fa mijanona ho eo am-pelatananao manontolo aho raha te hiresaka momba ny karamako indray ianao.
Misaotra anao mialoha noho ny fahatakaranao sy ny fampaherezana azoko taminao nandritra ny tafatafa nataoko isan-taona.
Mangataka fampiakarana karama: teleprospector
Mpiasan'ny orinasa hatramin'ny XXXXXX, mitazona ny toeran'ny telemarketer aho amin'izao fotoana izao.
Nanomboka tamin'io daty io dia nahazo traikefa matanjaka aho izay mamela ahy hihoatra lavitra ny tanjona napetraka.
Eny tokoa, araka ny isa, izaho dia iray amin'ireo telemarketer tsara indrindra:
Afaka miantso xxx isan'andro aho
Mahazo daty xx aho
Mahavita mamarana baiko maro aho
Ny tatitro, ho an'ny mpivarotra, dia tena mazava ary ahitana ny fampahalalana rehetra ilainy amin'ny fitsidihany.
Raha ampitahaina amin'ny 2020, dia mahomby kokoa aho, satria fantatro tsara kokoa ny vokatrao ary mahazo aina kokoa amin'ny ho avy aho. Mahafehy ny fihetsik'izy ireo aho izao, manantena ny valin-tenin'izy ireo aho ary nanomana tohan-kevitra handalo ny sivana voalohany.
Asa tena sarotra izany, satria tsy manam-potoana hiresahana aminay ireo mpiara-miresaka amintsika ary tsy maintsy mitady ny fehezanteny kely aho, na ny teny kely na ny tonona izay hitarika amin'ny fotoana iray.
Izany no mahatonga ny tenako hangataka resadresaka aminareo mba hiresaka momba ny karamako ho an'ny taona 2022. Tena mila tosika sy famporisihana avy aminareo aho mba hahomby hatrany ary hampitombo ny fidiram-bolan'ny orinasa.
Fangatahana fampiakarana karama amin'ny mailaka 24 Febroary 2022Tranquillus
Teo alohaMiitatra ny tambin-karama omena fialan-tsasatra tsy raisina noho ny krizy ara-pahasalamana
manarakaNy mpiasa amin'ny fialan-tsasatra dia afaka mahazo tombony amin'ny rafitra Tetezamita iombonana